Qatar: Rahona artifisialy mitatao ny Kianja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Marsa 2011 23:16 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Shqip, 한국어, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Roa andro taty aoriana, Vaovao lehiben'ny BBC Sport page izany ary miaraka amin'ny lahatsary fampihetsiketsehana ilay “rahona” voabaiko avy amin'ny Anjerimanontolon'i Qatar.
Ary nanomboka hatreo dia nitety ny Time, NBC Sports, Fast Company, Bldg Blog, ny Daily Mail, Engadget ary io9, raha tsy hanonona afa-tsy ireo.
Angamba ny nampihomehy indrindra – sy nisy namerimberina an-tsiokantsera indrindra – kosa dia hita tao amin'ny Yahoo! Sports: Qatar stole its artificial cloud idea from The Simpsons [Nangalarin'i Qatar ny hevitry ry Simpson momba ny rahona artifisialy]:
@thatbilloakley: Tokony handoa vola hono ny hevitra i Qatar: http://yhoo.it/g1EcMo
@sgmansfield: Hamorona rahona nataon'olombelona i Qatar hiatrehana ny Amboara Erantany 2022,Efa nisy naheno ny fanakona-masoandro ve ô? http://bit.ly/ghd2Ur
@staffordmasie: Masaka e! Hamorona rahona voabaiko ny Anjerimanontolon'i Qatar; Mba hampihena ny hafanana araka izay tratra eny amin'ny pelozin'ny Amboara Erantany http://t.co/RnleHP9
@mabdrabbo: Rahona vaobaiko ho an'i Qatar 2022 WC [Amboara Erantany] ? Cool ! Ahoana indray ny tabataba mety aterany ? http://bit.ly/dLRoKK #qatar #worldcup #2022 #football
@digitalcastro: Rahona ambonin'ny Kianjan'i Qatar 😉 Hevitra tsara http://twitpic.com/4dohml
@hmalsabah: Io ve izany Rahona Qatar eo ambonin'i #kuwait? :p http://plixi.com/p/86752846
@DavidQatar: @james_Corbett Miely tahaka ny afo ny tantaran'ity rahona ity- tsy misy ifandraisany amin'ny Q2022 – mpampianatra iray ao qatar mieritreritra ny hikaroka momba azy ity fa tonga dia boom
@dohanews: Fa hiberimberina mandrakizay ao amin'ny Twitter ve ity rahona artifisialin'ny Amboara Manerantany ao Qatar ity e??